अमेरिकामा के गर्दै छन् रेखा र सुदर्शन ? « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
अमेरिकामा के गर्दै छन् रेखा र सुदर्शन ?
११ असार २०७२, शुक्रबार १०:५२ मा प्रकाशित
अवसर पाउनासाथ विदेश सयर गर्ने, रमाइलो गर्ने अनि फर्कने । हातमा शून्य । प्रायः नेपाली कलाकारको अवस्था यस्तै हो । तर, केही कलाकार यस्ता पनि छन् जो विदेश पुगेको अवसर पारेर आफ्ना लागि होइन कि अरूका लागि पनि केही गरौँ भन्ने सोचमा हुन्छन् र त्यसबारे सोचिरहन्छन् ।
पछिल्लोपटक अभिनेत्री रेखा थापाले पनि अमेरिकाको बसाइमा नेपाली चलचित्र र नेपाली कलकारका लागि रामै्र, गतिलै र उल्लेखनीय कार्य गर्ने भएकी छिन् । ‘त्यसैका लागि म अमेरिका आएकी हुँ, तर उता नेपालमा मेरोबारेमा गलत हल्ला चलाइएको छ,’ उनले घटना र विचारसमक्ष गुनासो पोखिन् ।
अमेरिकामा रहँदा चलचित्र पत्रकारितामा लागिपर्दै आएका केही चलचित्र पत्रकार भूकम्पबाट पीडित भएको खबर सुनिन् उनले । यो खबरले स्तब्ध भएकी रेखाले उतैबाट आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आर्थिक सहयोग गरिन् । ‘यस्तो सकारात्मक र सहयोग गर्ने भावना अरूमा पनि जागोस् भन्ने मनसायका खबर मिडियामा आएनन्, तर सानो कुनै त्रुटिलाई पहाड बनाउनतिर हामी अग्रसर छौँ,’ उनको भनाइ छ ।
नेपाली चलचित्र र नेपाली कलाकारहरूको हितका लागि आफू अमेरिकामा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको कुरा रेखाले बताइन् र उनलाई त्यस कार्यमा विश्वचर्चित व्यक्तित्व सुदर्शन गौतमले साथ दिएका छन् । बजारमा सुदर्शन र आफ्नोबारेमा आएका अफवाहहरूलाई रेखा गलत र भ्रमपूर्ण भन्छिन् । ‘त्यो सब समयले बताउनेछ । केही समयपछि म नेपाल आउँदै छु र त्यसपछि सबै कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग हुनेछ । अहिले नबोलौँ,’ रेखाले भनिन् ।
अभिनेत्री रेखा थापाले अमेरिकाबाटै अब नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउन व्यक्तिगत नभएर संस्थागत रूपमा पहल गरिनुपर्ने कुरातर्फ जोड दिएकी छिन् । उनले नीति–नियम तरिकाले गयो भने यो कार्यमा चलचित्र विकास बोर्डले पहल गर्न सक्ने कुरा बताइन् ।
अभिनेत्री रेखाले अमेरिकामा रहेको हलमा हप्ताको एक शो भए पनि नेपाली चलचित्र चलाउन सकियो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुने र आफू त्यसका लागि अगाडि बढेको बताइन् । ‘यससम्बन्धी सुखद र सकारात्मक समाचार एवम् सन्देश लिएर म चाँडै आउँदै छु र चलचित्र विकास बोर्डसँग छलफल गर्नेछु,’ रेखाले अगाडि भनिन् ।
अभिनेत्री रेखा थापा महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धलाई केवल शारीरिक सम्बन्धको रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने कुरा बताउँछिन् । ‘महिला र पुरुषको सम्बन्ध अन्य पेसा, कार्ययोजना र क्षेत्रका लागि पनि हुन्छ । अब हाम्रो सोच र विचार फराकिलो हुनुपर्ने समय आइसकेको छ,’ यतिबेला अमेरिकामा रहेकी अभिनेत्री रेखा थापाको तर्क छ ।
आफ्नो अद्भूत र चमत्कारी क्षमताका कारण विश्वमा चिनिएका नेपाली केटो सुदर्शन गौतम पनि आफ्नो क्षमता र दक्षताले भ्याएसम्म नेपाली चलचित्रको विकासका लागि आफू लागिपर्ने कुरा बताउँछन् । ‘हिम्मतवाली चलचित्रमा दर्शकहरूले दिनुभएको माया र साथलाई म बिर्सन सक्दिनँ । त्यो नातालाई बलियो र निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन भए पनि मैले नेपाली सिनेमाका लागि केही गर्नैपर्छ,’ उनको प्रतिबद्धता छ ।
सुदर्शन यतिबेला नेपाली चलचित्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गरेको बताउँछन् । उनले अगाडि भने, ‘म नेपाली चलचित्र र कलाकारविरुद्ध कहिले पनि जान सक्दिनँ ।’
काठमाडौं । अभिनेतृ रेखा थापाले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग भेट गरेकी छन् । उनले समाजिक संजाल फेसबुकमा विप्लवसँग भएको
बलिउड अभिनेत्री जान्ह्वी कपुर आफ्नो फिल्म रुहीको विषयमा अहिले चर्चामा छिन् । हालै मात्र आफ्नो जन्मदिन मनाएकी उनी आफ्नो फिल्मको